Somaliland oo Sheegtay iney Walaac ka qabto Saldhigga Milateri ee Turkigu ka dhisay Muqdisho | SAHAN ONLINE
Somaliland oo Sheegtay iney Walaac ka qabto Saldhigga Milateri ee Turkigu ka dhisay Muqdisho
HARGEYSA – Maamulka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday iney il gaar ah ku eegayaan saldhigga Milatari ee dhawaan dowladda Turkiga ka furtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka Gaashaandhigga maamulka Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo la hadlay warbaahinta Somaliland ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay doonayaan in mar walba ay la socdaan dhaqdhaqaaqa saldhigaas.
Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa sheegay in cid walba ay xaq u leedahay iney u yeerato cidda ay taageerada ka heleyso ,sameysatana waxa ay dhaqaale ku helayso balse muhiim ay tahay iney la socdaan dhaq dhaqaaqa saldhiggan.
Iswaydiinta ugu wayni waxay tahay Soomaaliya ma inay dalkooda ku aslaaxiyaan oo ay nabadgelyadooda ku dhistaan ayay u samaysteen saldhigan, mise Somaliland ayay u hub urursanayaan. Sidaas awgeed, innagoo aan cidna cadaw ku ahayn haddana is dhigan mayno oo waxa qayrkeen haysto waa in aynu helnaa.”
Soomaaliya iyaga duco kama filayno innagoo aan xumaan la doonayn ayaynaan haddana faro madhnaanayn oo dhismaha ciidankeenna oo meel fiican marayana waan sii xoojinaynaa, saldhiga Millatari ee Berberana hawshiisa degdeg ayaan u gudo gelayna,”ayuu yiri wasiirka.
Todobaadkii hore ayey dowladda Turkigu waxay si rasmi ah xarigga uga jartay saldhig Milatari oo ay ka furteen magaalada Muqdisho.